WLRN-TV သည် File-based Storage Archive နှင့် Backup ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန် NVerzion ကိုရွေးချယ်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » WLRN-TV ကိုဖိုင်မှတ်တမ်း-အခြေပြုသိုလှောင်မော်ကွန်းတိုက်နှင့် Backup ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပါရန် NVerzion ရွေးကောက်
SALT LAKE CITY - ဇွန်လ 30, 2015 - NVerzion (R), ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားဘူတာရုံအလိုအလျောက်များအတွက်ဖြတ်တောက်-အစွန်း tools တွေကိုတစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူ, ယနေ့ WLRN-TV ကို, မိုင်ယာမီမှာရှိတဲ့ PBS ရုပ်မြင်သံကြားဘူတာရုံ, ထိထိရောက်ရောက်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်စွာနေထိုင်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်၎င်း၏ NVerzion အလိုအလျောက်ဖြေရှင်းချက်အဆင့်မြှင့်သည်ဟုကြေညာခဲ့သည် ယင်း၏ဗီဒီယိုကို server ပေါ်မှာ။ အဆိုပါ NVerzion အလိုအလျောက်နှင့်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက် OSStorage Infinidisc နှင့် QualStar LTO-6 စနစ်များပါဝင်သောအနေနဲ့အဆင့်မြင့် archive ကိုပလက်ဖောင်းတဝိုက်တည်ဆောက်လျက်ရှိကြ၏။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောအဖြစ်တတ်နိုင်သောထုံးစံ၌ရေရှည်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေချိန်မှာ NVerzion ရဲ့ NGenius (TM) နှင့် XPansion (TM) သိုလှောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်အသုံးချဖို့, WLRN လျင်မြန်စွာဖိုင်-based အကြောင်းအရာမျှဝေရန်နှင့်လဲလှယ်နိုင်ပါတယ်။
"NVerzion ရဲ့ဖြေရှင်းချက်စေလွှတ်မတိုင်မီကကျနော်တို့ရေရှည်သိုလှောင်မှုအတွက်ပြင်ပ hard drives တွေကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒီချဉ်းကပ်မှုစျေးကြီးကြီး, ငါတို့စဉ်ဆက်မပြတ်သစ်ကို hard drive တွေကျနော်တို့အာကာသထဲကအထဲသို့ပြေး ဝင်. တစ်ဦးချင်းစီအချိန်ကိုဝယ်ယူခဲ့သောကွောငျ့, ကဆာဗာအလွန်အချိန်ကုန်ထံမှဖိုင်လွှဲပြောင်းလုပ်, "ရွိုင်း Elston, WLRN မှာစစ်ဆင်ရေးမန်နေဂျာနှင့်မာစတာထိန်းချုပ်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူးကဆိုသည်သာ။ ဖိုင်-based ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းတစ်ဦး, ယုံကြည်စိတ်ချရသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုပေးနေချိန်မှာ "NVerzion ရဲ့သိုလှောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကိုသိသိသာသာကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ဆင်ရေးအရှိန်မြှင့်။ WLRN standby အပေါ်ပိုပြီး programming ကိုရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုခြင်းအားဖြင့်, NVerzion ရဲ့ဖြေရှင်းချက်ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ရှုရန်အတှေ့အကွုံပိုကောင်းတဲ့အရည်အသွေးကိုကယ်နှုတ်ကိုကူညီပေးပါတယ်။ "
nearline သိုလှောင်မှုနဲ့ရေရှည်သိမ်းဆည်းဘို့ NVerzion ရဲ့ XPansion ဖြန့်ဖြူးသိုလှောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်အသုံးပြုခြင်း, WLRN လျင်မြန်စွာပြည်တွင်းရေး Preview, တည်းဖြတ်ရေးနှင့်သယံဇာတစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ဒေတာပမာဏရှာဖွေပြီးပြန်လည်ရယူနိုငျပါသညျ။ XPansion ဘူတာရုံ်ထမ်းတစ်ဦးန့်အသတ်အရေအတွက်ကဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာမျှဝေရန်နှင့်ဖလှယ်နိုင်သည့်မှတစ်ဆင့်ရိုးရှင်းသောအလိုလိုသိ interface ကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ ဤသည်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်ဒေသအလိုက်သို့မဟုတ်တကမ္ဘာလုံးစီမံခန့်ခွဲခံရဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ မှားယွင်းမှုများနှင့်အဖွင့်ဖွင့်ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းများကိုများအတွက်အလားအလာလျှော့ချနေစဉ် "တစ်ချိန်ကထုတ်လုပ်ရန်, နေရာတိုင်းထုတ်ဝေရန်" အစီအစဉ်အပျေါမှာတညျဆောကျ, XPansion, WLRN အချိန်သိသိသာသာငွေပမာဏကိုကယ်တင်တော်မူ၏။ XPansion ၏ modular ဒီဇိုင်းပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပူးတွဲတင်ပြထား, ဖိုင်ကို-based လုပ်ငန်းအသွားအလာအတွင်းပျက်ကွက်မဆိုတစ်ခုတည်းအမှတ်ရှင်းလင်းစေပါတယ်။
တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောအလိုအလျောက်နှင့်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ WLRN ပေးခွငျးအားဖွငျ့, NGenius ဘူတာရုံရဲ့ရေရှည်ပိုင်ဆိုင်မှုများထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ။ WLRN နေဖြင့်သတ်မှတ် built-in, အသိဉာဏ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကတဆင့်, NGenius ချက်ချင်းတန်ဖိုးပိုင်ဆိုင်မှုကို process နှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဘူတာရုံနိုင်ပါတယ်။ ယာယီ OSStorage Infinidisc ပလက်ဖောင်းဗီဒီယိုပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးမျိုးမှ WLRN ဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်, NGenius ဒေတာတစ်ခုကပ်ဘေးဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်စဉ်နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာကာလကျော်လုံခြုံထားရှိမည်ကြောင်းအာမခံပါသည်။
WLRN မှာအသစ် XPansion နှင့် NGenius ဖြေရှင်းချက်အပါအဝင် NVerzion ကနေလက်ရှိအလိုအလျောက်ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူပေါင်းစည်းကြသည်: NControl MC On-ဝေဟင်သီချင်းစာရင်းကို, NGest ပရော်ဖက်ရှင်နယ် dubbing နှင့်အသံဖမ်းဆော့ဖ်ဝဲ, segmenting နှင့်ချုံ့ခြင်းအဘို့အ NPoint ဗီဒီယိုအားပြင်ဆင်မှုဆော့ဖ်ဝဲ, NBase SQL မီဒီယာဒေတာဘေ့စမန်နေဂျာ , NCommand စက် status ကိုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု, NConvert လက်စွဲစာအုပ်နှင့် automated အသွားအလာ interface ကို, NTime အချိန်-မောင်းနှင်ဖြစ်ရပ်အချိန်ဇယားဆွဲ, EMC Ethernet ဟာစက်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်, BXF အသွားအလာဆက်သွယ်ရေးများအတွက် CPIM ဖန်တီးမှု protocol ကို interface ကို module တစ်ခု။
"WLRN-TV ကိုကအရေးပါဘူတာရုံအကြောင်းအရာကာကွယ်ပေးသည်သို့သော်၎င်း၏ဖြန့်ဖြူး streamlines မသာတစ်ခု automated သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်ချမှတ်ကြောင်းအောင်, တစ်နှစ်ဖိုင်-based ပိုင်ဆိုင်မှုအကြီးအကျယ်အရေအတွက်ကိုကိုင်တွယ်," ရိဒ် Haslam, NVerzion မှာအရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏ညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။ "NVerzion ရိုးရာ LTO နဲ့ cloud မော်ကွန်းတိုက်အပါအဝင်အသိဉာဏ်ဖိုင်-based စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ, အမျိုးမျိုးပေးထားပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာပိုကောင်းတဲ့အရည်အသွေးပေါ်-ဝေဟင်တင်ဆက်မှုနှင့်တိုးမြှင့်ကုန်ကျစရိတ်ငွေစုဖို့ဦးဆောင်အကြောင်းအရာ၏လုံခြုံရေးအာမခံအနေဖြင့်သိမ်းဆည်းရန်, ယုံကြည်စိတ်ချရသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်မျှမျှတတချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူ WLRN တူသောဖောက်သည်ပေးခွငျးအားဖွငျ့, NVerzion သူတို့ရဲ့ဖိုင်ကို-based လုပ်ငန်းအသွားအလာ၏ထိရောက်မှုတတ်တယ်။ "
NVerzion နှင့်၎င်း၏ထုတ်ကုန်အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.nverzion.com.
NVerzion (R) (အကြောင်းwww.nverzion.com)
NVerzion (R) OPEX နှင့် CAPEX လျှော့ချ, ရှာမှီးကနေ content တွေကိုဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ပလေးအောက်တစ်ခုအော်ပရေတာတစ်ခုလုံးရဲ့လုပ်ငန်းအသွားအလာချောမွေ့ကြောင်းဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လွှင့်အလိုအလျောက် tools တွေကိုတစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ မဆိုတည်ဆဲအခြေခံအဆောက်အအုံသို့လွယ်ကူသောအကောင်အထည်ဖော်မှုကိုထောက်ပံ့မယ့်အစိတ်အပိုင်းကိုအဆင့် Automation System ကိုအဖြေရှာခြင်း (CLASS (TM)) အယူအဆအပေါ်အခြေခံပြီး, NVerzion အလိုအလျောက်ဖြေရှင်းချက် Third-party စနစ်များနှင့်အတူအသုံးပြုသူများသည်အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု, ယုံကြည်စိတ်ချရ, redundancy နှင့်အာမခံအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါဆက်ကပ်။ အားလုံး NVerzion စနစ်များကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်လေ့ကျင့်ရေး, ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူကျောထောက်နောက်ခံပြုနေကြသည်။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ NVerzion သိုလှောင်ခြင်းမော်ကွန်းတိုက် တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် WLRN-TV ကို 2015-06-30
ယခင်: အစဉ်အမြဲမီဒီယာအကောင်အထည်ဖော်မှု Matrix Solutions မီဒီယာအရောင်းပလက်ဖောင်း
နောက်တစ်ခု: တီဗီမှတ်တမ်းအကြောင်းအရာစားသုံးမိဘို့ GLOOKAST ရွေးချယ် - ပန်းအမေရိကန်ဂိမ်းအဘို့မိုဃ်းတိမ်သည်နည်းပညာကိုပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများ